NANNING TAGRM CO., LTD bụ ọkachamara mmebe & emeputa nke compost igwe, ya ụzọ e hiwere na 1997. TAGRM mere ka onwe-propelled compost Turner nnyocha na mmepe na n'oge gara aga 20 afọ. Anyị enwetala 3 mepụtara nchọpụta Kemịkalụ na a ọnụ ọgụgụ nke ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ. Ngwaahịa nweta asambodo CE, ụlọ ọrụ weghaara asambodo ISO9001: 2015.
Anyị na-ebu ahaziri ngwaahịa imewe, ahaziri oru ọrụ, na-enye ihe ọkachamara ọrụ ahịa.
M Series ndị na-atụgharị compost ndị na-atụgharị onwe ha bụ igwe ọrụ pụrụ iche maka ịgba ụka na mmiri. A na-eji ha agwakọta, pulverize, ma mụbaa oxygen nke ihe ndị dị na ikpo, na mgbakwunye, mgbe ndị na-atụgharị compost kwadebere ha na ngwaọrụ spraying bacteria, ha nwekwara ike ịgba nje ahụ.
Compost tụgharịrị bụ ezigbo akụrụngwa maka ịgbanwe mkpofu ahịhịa, nsị anụmanụ, na mkpofu ndu ndu na akwa fatịlaịza microbial site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ.
Site na arụmọrụ magburu onwe ya, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na oge ahịa ahịa, TAGRM na-atụgharị compost Turner ezigara ya Brazil, Mexico, Ecuador, Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Nigeria, Ghana, Zambia, Congo, Tanzania, Russia, Spain, Argentina, Bulgaria, Czech Republic, Uruguay, New Zealand, Paraguay, South Korea, Vietnam, Cambodia, Kenya, Kazakhstan, Kuwait, Saudi Arabia, Namibia na obodo ndị ọzọ karịrị 80. Anyị ga-anọgide na-enye ọkachamara, ngwaahịa na ọrụ dị elu dị elu na ụlọ ọrụ fatịlaịza zuru ụwa ọnụ.
Na-elekwasị anya na igwe compost, na-eme ka ọrụ bear ahụ sie ike, site na usoro ọchịchị zuru oke, usoro njikwa ihe ọhụụ, na-azụlite teknụzụ ndị isi nke compost na-akwalite mmepe nke ụlọ ọrụ fatịlaịza fatịlaịza, na-akwalite mgbanwe na nkwalite, yana mmepe dị elu!
TAGRM na-echekwa usoro mbara igwe nke ụwa. Site n'inyere & ịgba ndị mmadụ ume gburugburu ụwa ka anyị jiri nsị anyị mee ihe nke ọma, dị ka mkpofu obodo, swill na mkpofu nri, nsị anụmanụ, wdg, TAGRM na-anwa ike ya niile ichebe ụwa anyị.
Site na ebumnuche ndị a, anyị agbasawanye ahịa anyị mgbe niile na asọmpi ahụ na ndị ibe ụlọ na ndị si mba ọzọ, ma debekwa ọnọdụ na-eduga n'ọhịa nke ndị na-emepụta compost na onye na-arụpụta igwe na China.
Anyị na-akwado nkwado “aturiri aturiri atumatu, ọfụma ma na-adịgide adịgide” ma na imepụta ya, ma na-enye ndị ahịa ngwa ahịa ahaziri iche na atụmatụ mmepụta ọkachamara.
Manufacturelọ ọrụ na-arụ ọrụ na-ekpuchi mpaghara nke 13000 square mita, na igwe mpempe plasma CNC, igwe mpempe akwụkwọ efere, ụlọ ọrụ nhazi kọmputa, CNC lathe, igwe igwe na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Pịa ebe a maka nkọwa ndị ọzọ gbasara oge akwụkwọ ikike TAGRM